Nweta nkwalite WordPress na 2.05 na-enweghị messing gị na saịtị! | Martech Zone
M hụrụ WordPress n'anya ma kwado ya maka ndị ahịa m niile. Taa, a tọhapụrụ ụdị kachasị ọhụrụ. I nwere ike ịgụ maka ndozi ma budata nkwalite ahụ Ebe a. Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ na mmelite:
IHE: Gbalịa izere 'hacking' koodu isi na WordPress, ọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe. Enwere m 'hacks' ole na ole mana m na-edebe ha ederede ka ọ bụrụ na m budata ụdị ọhụụ, enwere m ike ịmezigharị m ma gaa n'ihu. Zerekwa itinye ụdị faịlụ omenala ma ọ bụ folda ọ bụla na folda ọ bụla na mpụga gị WP-content folder.
Ọ bụrụhaala na ị anataghị WordPress, usoro mmeghariri na-aga n'ihu (Foto dị na ya Ebufe ụjọ na 3.5.5)
1. Mepee gị FTP ahịa, họrọ faịlụ niile si WordPress nweta nkwalite ma wepụ ya WP-content folda. Detuo n'elu folda na faịlụ dị.
2. Ugbu a, mepee WP-content folda dị na isi mmalite gị na ebe nchekwa gị. Detuo na faịlụ index.php.
3. Egbu, rummage site na WP-content subfolders na folda gị na ebe nchekwa gị. Detuo na gburugburu na plugins dị ka achọrọ, na-ezere ihichapụ nke ọ bụla nke plugins na gburugburu nke ị gbakwunyere ma gbanwee.
4. Gị nzọụkwụ ọzọ bụ nanị nbanye gị Nlekọta interface (wp-admin). A ga-akpali gị iji kwalite nchekwa data gị. Pịa bọtịnụ ma ịmechaa!
N’ebe ahụ ka inwere ya, emelitere gị. Olileanya na a na-enyere gị aka!
Ọkt 29, 2006 na 10:53 PM
Apple-Shift-3 na nseta ihuenyo echekwara na desktọpụ m. Ọ dịghị 'Print-Screen' ma ọ bụ 'Alt-Print-Screen', Mepee Illustrator, mado, akuku, chekwaa maka webụ, gbanwee nha, tọọ ụdị oyiyi, chekwaa.
🙂 Ọ dị nnọọ mfe!
Ọkt 30, 2006 na 7:44 AM
M doziri ochie m iBook G3 ọcha. Ọ na-agba Agụ n'ụzọ zuru oke ma na-ewepụ ya ma na-atụgharị ya ọzọ bụ ikuku na-enye ekele maka ntụzịaka aka nke ifixit.com. Ị gaghị enwe ike ikwu nke ahụ na PC ọ gwụla ma ị bụ ọkachamara n'iwepụ ha iche; m, ọ dịtụbeghị mgbe m mere ụdị ihe ahụ mbụ.
Mgbe PC mechara nwụọ, ezinụlọ anyị, ma ọ dịkarịa ala, na-aga ịgbanwe gaa na Mac Mini. Enweghị m mmasị n'ịga nso kọmputa ọ bụla na-agba Vista.
Ị kwuru eziokwu gbasara OS. GUI dị ebube ma nwee nghọta.
Ọkt 30, 2006 na 7:26 PM
Dị nnọọ dechara update, rụọ ọrụ w / ọ bụla nsogbu. Daalụ!